Wareysi Hay'ad NGO.
Warasysigii SomailTalk ee Gudoomiyaha Hay'adda Somlink, Mudane C/qaadir Xuseen Maalin (marshaale)
Waxaa isku soo dubaridey: Canab Abdule
canabmumtaz@yahoo.com | SomaliTalk | Nairobi
Gudoomiyaha Hay'adda Somlink Mudane C/qaadir Xuseen Maalin(marshaale) oo hadda howlo shaqo u jooga dalka Kenya,waxaana ka wareystay dhinacyo badan oo ku aadan waxqabadka Hay'addaas iyo waxa ay kutala jiraan mustaqabalka soo socda wareysigii oo dhamaystirana waa kan.
Somalitalk: Waxaad naga siisa warbixin kooban Hay’adda SOMLINK?
Jawaab: Somlink waa Hay’ad Samafal Soomaliyeed waxaana la aas aasay sanadku markuu ahaa 1994. waxayna daraasado badan ka sameysay guud ahaan dalka oo dhan, waxayna leedahay xeer hoosaad iyo qaanuun ku saabsan xagga maamulka iyo maaliyadda. Waxaana aasaasey aqoonyahanoo soomaaliyeed oo ka kooban 5 xubnood waxanna howlo badan ka soo qabanay Gobollada Galgaduud, Shabellaha dhexe, Bari, Hiiraan, bay iyo Bakool
Hawlihii iyaga ah waxaa ka mid ahaa 96 waxay Hay’addu ka qayb gashay tababarro la xiriira horumarinta hay’adaha, Muumulida qarajyada, diyaarinta warbixinada kala duwan, diyaarinta mashaaricda, dalabyada maaliyadda iyo dhinacyada kala duwan ee maamulka.
Waxay Hay’addu u faa’ideysay in ka badan 5000 qofood si toos ah iyo si dadban intuba Mashruucii ugu horeeyey waxaanu ka hirgelinay Degmada Galcad ee Gobolka Galgaduud sanadka markuu ahaa 1997. Sanadihii 1997-2000 waxay Hay’addu qaybisay raashiin dhan 3000 metrik ton oo lagu dayactiray wadooyinka isku xira gobollada dhexe iyo kuwa bari.
Sanadihii 1998-2000, Degmada Cadale ee Gobolka Shabeelada dhexe waxaan u fidinay tababarro la xiriira xagga horumarinta kallumeysiga iyo qaababka ugu haboon ee loo jilaabto, iyadoo aanu xoogga saarnay haweenka iyo kaluumeysatada danta yar una qaybinay shabaago, dooman iyo aqoon ay ku horumariyaan xirfadahooda ay ku shaqeystaan.
Waxaan dib u furnay dugsi hoose dhexe 2001 oo dhigata 500 arday oo manhajkii hore ee af Soomaliga, maadama dugsiyada hadda jiraa ay yihiin kuwo lacag, ilmaha taagta daran ee haleeshay dhibaatada iyo colaadaha aysan iska bixin karin qarajyada waxbarasho, ayaynu ugu tabarrucnay. Waxaa inoo suura geli waysay in aanu dib u furno xarumuhiii caafimaadka degmada Kaaran sababo xagga amniga awgeed. Iyadoo aanu rabnay in aan ugu talo galno haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya iyo caruurta da’doodu ka yartahay 5ta sano ay ka helaan nafaqo tayeysan iyo daawo lacag la’aan ah.
Hay’addu waxay heshay hadiyad International Speaker Aid and Trade africa 2003, waxaa ururka Somlink lagu daray liiska u dooda horumarinta Africa xagga samafalka iyo ganacsigaba. Marka howlihii ay qabatay awgeed, waxay hawl ballaaran ka qabatay in la gaarsiiyo in ka badan 40,000 ton raashi gobollada Hiiraan, Bay iyo Bakool, Hay’addu ma ahayn keliya mid ku kooban hawlaha samofalka ah, balse waa mid ogol raalina ka ah in Somalidu ay wax qabsato Hay’ad ahaan ama shaqsi ahaan. Muhiim ma ah in hay’adda Somlink wax walba qabato laakin haddii shacabku wax helaan taa baa inoo muhiimsan oo priority siinnaa inta badan, taasina waxaanu ku guuleysanay inaan ka mid noqono guddiyada heer caalami anagoo matalna hay’adaha Soomaaliya oo dhan, marka laga hadlayo horumarinta, dib u dhiska, iyo dib u heshiisiinta Somalida. Hayaddani Somlink waxay gacan wayn ka gaysatay sii dayntii saraakiishii qaramada midoobay iyo Hay’adaha caalimga ee lagu afduubtay Somaliya,
Somalitalk: Ma jiraa wax howl ah oo Hay’adda Somlink ay ka wado magaalda Nairobi ?
Jawaab: Haa, horay waan uga qabanay oo xuska maalinta nabadda Adduunka 2004 ayaanu ka hirgalinay annagoo ka mid ah koox xuddun u ah abaabulka iyo hirgalinta xafladaha maalinta nabadda oo laga hirgeliyey dalka Soomaliya oo dhan.
Hay’addan oo loo doortay oo tartan la galay 7 hay’adood oo laba caalami yihiin 5ta kalena ay Soomaali yihiin, nasiib wanaag Somlink ayaa loo doortay dhanka soomaaliya inay ka mid noqoto Guddi lagu magacaabo Global Fund Aids Tuberculoses and Malaria Technical Coordination Taskforce oo ka mid 16 hay’adood sida, undp, unicef, horn relief, handicap international, somlink, Merlin, CCM Italy, world vision, ifrc/srcs, unfpa, who, sacb, world bank, DFD iyo 3 xubnood xagga maamulada dawliga ah.
Global fund lacagta ay ugu deeqday Soomaaliya oo dhan 25 malyan oo dollar shanta sano ee soo socota oo lagu qabanayo hawlaha ka hortagga cudurka Aids iyo daaweyntiisaba oo Soomaaliya oo dhan ah, UNICEF oo noqon doonta hay’adda ugu horeysa ee lacagtaasi helaysa iyada oo mashaariic kala duwan u gudbin doonta hay’adaha caalamiga iyo kuwa waddaniga, iyo kuwa qaran intuba. Guddigeena hadafkiisu waa:
Horumarinta tayada iyo habka loo xulanayo mashaariicda
In la dhamaystiro baahida documentiga loo baahan yahay GFATM
In lasiiyo macluumaad dhab ah cidda ay qusayso
In la xaqiijiyo isuduwiyada iyo mideynta hay’adaha maalgelinaya iyo kuwa hawsha hirgelinaya
Guddigan aan ka mid ahay Somlink ahaan waxaa mas’uuliyadeenu tahay in aanu diyaarino sidii iyo dariiqadda ay u soo mari karoon codsadayaasha ama hirg geliyaasha mashaariicda ha ahaadaan somaali ama mid caalami ah.
Somalitalk: Goormaad is leedahay mashaariicdan ayaa la soo dalban karaa?
Jawaab: Waxaan hadda dhamaynay qaabkii ay ku soo dalban lahaayeen hay’adaha caalamiga iyo kuwa Soomaalida, maalinta talaadada ama arbacada ayaan si rasmi ah u soo baahin doonnaa sidii loo soo dalban lahaa mashaariicda la xiriira hawlaha AIDS marka waxaan ku soo daabici doonaa web page-yada hay’adaha soomaaliya ka shaqeeya iyo dabcan kuwa soomaalida intuba.
Somalitalk: Sida ay muuqato hey’adiina waxey qabatay shaqooyin ballaaran, yaa idin maalgeliyey waqtigaasii dheeraa?
Jawaab: Hay’adani waxaa malgeliyey hay’adaha WFP/CARE, USAID/CARE, UNPOS/UNDP. UNICEF, UNESCO iyo hayado kale oo hadda online ku soo jira.
Somalitalk: Qorshaha dhow, maxaad ku tala jirtaan in aad dalka ka qabataan?
Jawaab: Waxaan hay’adda u qorsheysan Haddii Ilaah la garab galo:
in aan sameyno xarumo lagu tabaro kaluumeystada somaaliyeed.
Bilaha soo socda sidii baarlamanka soomaliyeed aanu u tabari laheen oo aanu kor u qaadi lahayn xagga aqoontooda, dhanka xalinta qilaafaadka iyo sidii loo dhisi lahaa nabad xooggan lana gaarsiin lahaa wadanka oo dhan.
Iyo hub ka dhigidda dhalinyarada yar oo shaqo la’aanta dilootay si ay u helaan fursado fiican ay wax ku bartaan haddii ay ahaan lahayd xirfado shaqo ama mid maamu.l
Somalitalk: Maxaad talo u soo jeedinaysaa dhalinyarada Soomaliyeed ee ku nool dibedda?
Jawaab: Waxaan u soo jeedinayaa inay maanka ku hayaan in shacabkoodii ay ka soo tageen weli u baahan yihiin oo aysan ka maarmin, maadama ay fursado aqooned iyo qibrado aad ka hesheen dalka dibediisa in dib loogu faa’ideeyo dadkii aad ka soo tagteen haddii ay ahaan lahayd xagga wax barida, kaalmada, iyo ugu yaraan la is waydaarsado qibradaha ay ka soo dhaxleen dibedda. Waxaanu leenahay dalkiinii iyo dadkiina wuu idiin baahan yahay, ee u soo jeesta idinkoo dantiida wata iyaga waqti siiya sidii loo horumarin lahaa xagga disb u heshiisina, iyo dib u dhiska Somalia guud ahaan. Dhalinyarada dibedda jirta waa xoogga ugu ballaaran haddii ay midooban dalkana wax weyn u tari karo.
Waxii talo iyo tusaale ah ee ku saabsan wareysigan, fadlan u soo gudbiya:
Abdulkadir Hussein Maalin